मसाज सेन्टरमा अवैध धन्दा ! ३० मिनेटपछि युवती सोध्छिन् एक्स्ट्रा…….. – Kendra Khabar
२०७५, ८ माघ मंगलवार ०५:०३
‘यहाँ मसाज गराईन्छ’ बोर्डमा लेखिएको हुन्छ । मसाज गराउनका निम्ति ग्राहक काउन्टरसम्म पुग्छन् । त्यसपछि महिला होस् या पुरुष स्वागतका निम्ति आउने गर्दछन् । पानी पिउन दिईन्छ । त्यसपछि सोध्ने गरिन्छ भन्नुहोस् सर कस्तो मसाज गर्ने ? थाई, स्वीडिश, डिप टिश्यू अर्थात् ट्रिगर आदि आदि । दर्जनौँ मसाजका विकल्प प्रस्तुत गरिन्छन् ।
भारतको दिल्लीमा रहेका करिब ३४ वटा मसाज सेन्टरको रिपोर्टका आधारमा यो बिषय बाहिरिएको हो । जहाँ मसाज गर्ने महिलाले ग्राहकसँग एक्स्ट्रा रेटको तय गर्दछन् । एक मसाज गर्लका अनुसार एक्स्ट्रा मसाजका लागि एकजनाको करिब २ हजारदेखि रेट तय हुने गर्दछ । यसमा दुवै पक्षको परामर्शका आधारमा रेट तय हुने गर्दछ । मसाज सेन्टरमा काम गर्ने युवती भन्छिन्, ‘एक्स्ट्रा रेट मसाज गर्ने बेला नै लिईन्छ ।’ पहिले अवैधधन्दामा संलग्नहरुमात्रै मसाज सेन्टरमा जान्थे अहिले कलेजमा पढ्ने युवतीको समेत आकर्षण बढेको छ । उनीहरु नाम चेन्ज गरेर त्यहाँ काम गर्छन् ।